ရွှေဖြူလက်စွပ် (2) - Forever Gems
Ks. 220,400 Ks. 232,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 236,550 Ks. 249,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 186,200 Ks. 196,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 116,850 Ks. 123,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ks. 141,550 Ks. 149,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ring WGRN 80
Ks. 64,600 Ks. 68,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ring WGRN 70
Ks. 113,050 Ks. 119,000 ကုန်ပစ္စည်း ကုန်နေသည်။
Ring WGRN 71
Ks. 91,200 Ks. 96,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ring WGRN 72
Ring WGRN 73
Ks. 122,550 Ks. 129,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ring WGRN 74
Ks. 132,050 Ks. 139,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ring WGRN 77
Ks. 54,150 Ks. 57,000 ကုန်ပစ္စည်း ကုန်နေသည်။
Ring WGRN 78
Ring WGRN 79
Ks. 48,450 Ks. 51,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ring WGRN 81
Ks. 65,550 Ks. 69,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ring WGRN 82
Ks. 62,700 Ks. 66,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။
Ring WGRN 83
Ring WGRN 84
Ks. 83,600 Ks. 88,000 ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။